I-Leica C-Lux, i-compact super zoom enkulu yoyilo kunye noyilo oluhle kunye ne-1-intshi sensor | Iindaba zeGajethi
Kuyinyani ukuba intengiso yeekhamera ezihambelanayo ibethwe kakhulu zii-smartphones. Kuyinyani ukuba bathatha indawo encinci epokothweni, ubhaka okanye engxoweni. Nangona kunjalo, kufuneka uphathe ezimbini elektroniki ngentla apha yinto engavunyelwanga ngumntu wonke. Isiphumo? Ndithatha i "all in one" kunye ne voila; Oko kukuthi: iselfowuni ekrelekrele.
Oko kwathethi, kukho iinkampani eziqhubeka nokubheja kwiimodeli ezihambelanayo kodwa zibonelela ngokudibanisa neselfowuni premium nantoni na, andinakunikela. Okokugqibela ukufika ngu ULeica C-LuxIkhamera enoyilo olukhulu-njengayo yonke into ayinika uLeica-, kunye neempawu ezintle zokuba liqabane lakho elithembekileyo naphi na apho uya khona.
Ungayifumana iLeica C-Lux ngeendlela ezimbini ezahlukeneyo: igolide okanye luhlaza okwesibhakabhaka. Okwangoku, kwaye njengoko besitshilo, inoyilo olumbeneyo, nangona oku akuthethi ukuba inika iziphumo ezilungileyo. Ukuqalisa, isivamvo sayo 1 intshi; Ngamanye amagama, iqhekeza lekhekhe liya kuphikiswa ngeemodeli ezikhuphisanayo ezinje ngeSony okanye iPanasonic. Kwakhona esona sigqibo siphezulu apho unokufaka khona imifanekiso zii-megapixels ezingama-20.
Kwakhona, le Leica C-Lux ibandakanya ukusondeza ukuya kuthi ga kwi-15 yokunyuka; unikeza ukukhanya okwakhelwe ngaphakathi; Iscreen sayo siyi-intshi ezi-3 kunye nokuchukumisa okuninzi; Ukongeza ekunikezeleni ngefayile ye- Isibonisi seLCD ukuya kuthi ga kwi-2,3 yezigidi zamachaphaza okusombulula. Yintoni enye esinokuyithetha ngayo? Ewe, kwinxalenye yonxibelelwano Siza kuba nazo zombini iBluetooth kunye neWiFi, Into edume ngokuthandwa kwee-mobiles kunye amacwecwe phantse kukudibana okunyanzelekileyo.
Ngokubhekisele kwinxalenye yevidiyo yale Leica C-Lux, ukuba inkampani ifuna ukuba imodeli yayo ibe nokwenzeka, ayinakusityeshela esona sisombululo sithandwayo ngalo mzuzu: ngokuchanekileyo, oku kunokuba neziqeshana ze-4k. Okokugqibela, ndikuxelele ukuba ixabiso layo aliyi kuba ngexabiso eliphantsi: liza kuqhubeka ukuthengisa ngoJulayi olandelayo kwaye libethe ezivenkileni ngexabiso le- IRandi ye1.050.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Umfanekiso kunye nesandi » Ukufota » I-Leica C-Lux, ukusondeza okutsha okucokisekileyo kunye noyilo oluhle kunye ne-intshi ye-1-intshi